DHAGEYSO: Murashaxiinta Oo Hal Arin Ku Hanjabay Hadii Muddo Kordhin dhacdo – XAMAR POST
Kadib Kulan deg deg ah oo xalay fiidkii ay iskugu yimaadeen Golaha Midowga Murashaxiinta ayey kasoo saareen digniino ku aadan Xaalad adag oo dalka inuu galo ay ka cabsi qabaan.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah Gudoomiyaha Golaha Murashaxiinta Oo shir jaraa’id qabtay Kulankooda kadib ayaa ka digay in madaxweyne farmaajo maanta loo sameeyo muddo kordhin Xafiiska uu kusii joogayo,isagoo sheegay in cawaaqib xumo ka dhalan karto hadii qorshaha la diyaariyey la fuliyo.
Shariifka ayaa hoosta ka xariiqay in ay Dawlada Madaxweyne Farmaajo hogaamiyo ku Eedeeyey Caburin Siyaasadeed in ay sameysay muddadii xukunka ay hayeen,sidaa awgeedna uusan dalka qaadi Karin xukunka oo awood lagu sii joogo,sida uu warka udhigay Sheekh Shariif.
Golaha Midowga Murashaxiinta ayaa soo jeediyey in gacmaha la isku qabsado ka hortegida wax kasta oo bur burin Dawladnimada ah iyo Sharciga La dejiyey keeni karta,iyagoo ku dhaleeceeyey madaxweyne Farmaajo awood muquunis uu damacsan yahay in Dalka uu kusii maamulo muddo sanado kale ah.
Hadalka Murashaxiinta Mucaaradka ayaa kusoo beegmaya xilli Shaki badan kulanka maanta Baarlamaanka uu ku geedaaman yahay islamarkaana laga yaabo in muddo kororsi Baarlamaanka iyo Xafiiska Madaxweynaha loo sameeyo.
FAAH FAAHIN: Meydka Afar Qof Oo Saaka Lagu Arkay Xeebta…